रोमी ७ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
७ ए भाइहरू हो, (म व्यवस्था थाह भएकाहरूसित बोल्दैछु) मानिस जीवित रहुन्जेलसम्म ऊमाथि मोशाको व्यवस्थाको प्रभुत्व रहन्छ भनेर कतै तिमीहरूलाई थाह छैन कि? २ उदाहरणका लागि, विवाहित स्त्री आफ्नो पति बाँचुन्जेल व्यवस्थाबमोजिम उसैसित बाँधिएकी हुन्छे; तर यदि उसको पति मऱ्यो भने ऊ आफ्नो पतिको व्यवस्थाबाट मुक्त हुन्छे। ३ त्यसैले आफ्नो पति जिउँदो छँदै उसले अर्को पुरुषसित विवाह गरी भने ऊ जारिणी कहलाइन्छे। तर यदि उसको पति मऱ्यो भने ऊ आफ्नो पतिको व्यवस्थाबाट मुक्त हुन्छे, त्यसैले उसले अर्को पुरुषसित विवाह गरी भने पनि ऊ जारिणी हुँदिन। ४ त्यसकारण, ए मेरा भाइहरू हो, तिमीहरू पनि ख्रीष्टको शरीरद्वारा मोशाको व्यवस्थाको नजरमा मरिसक्यौ, ताकि तिमीहरू उहाँको हुन सक, जो मृत्युबाट ब्यूँताइनुभएको थियो। यसरी हामी परमेश्वरको आदर हुने फल फलाउन सक्छौं। ५ किनकि जब हामी शारीरिक इच्छाअनुसार चल्थ्यौं, तब मृत्युको फल फलाउन पापी इच्छाहरूले हाम्रा अङ्गहरूमा काम गर्थे, जुन मोशाको व्यवस्थाले गर्दा प्रकट भए। ६ तर अहिले हामी मोशाको व्यवस्थाबाट मुक्त भइसकेका छौं, किनकि हामीलाई जसले बाँधेर राखेको थियो, त्यसको नजरमा हामी मरिसकेका छौं। हामी लिखित नियमको आधारमा पुरानो अर्थमा होइन तर पवित्र शक्तिको आधारमा नयाँ अर्थमा दास बनौं भनेर यसो भएको हो। ७ त्यसोभए, हामी के भनौं? के मोशाको व्यवस्था पाप हो? त्यस्तो कहिल्यै नहोस्! साँच्चै भन्ने हो भने मोशाको व्यवस्था नहुँदो हो त पाप के हो, मलाई थाह हुनेथिएन। उदाहरणका लागि, “तिमीले लालच नगर्नू” भनी मोशाको व्यवस्थाले नभनेको भए लालच के हो, मलाई थाहै हुनेथिएन। ८ यो आज्ञाले गर्दा प्रोत्साहन पाएर पापले मभित्र हरप्रकारको लालच उत्पन्न गऱ्यो, किनकि व्यवस्था नहुँदा पाप पनि मरेकै थियो। ९ वास्तवमा, कुनै समय व्यवस्था नहुँदा म जिउँदो थिएँ तर जब व्यवस्था आयो, पाप फेरि जीवित भयो तर मचाहिं मरें। १० जुन व्यवस्था जीवनको लागि दिइएको थियो, त्यही नै मेरो मृत्युको कारण पो रहेछ भनेर मलाई थाह भयो। ११ व्यवस्थाले गर्दा प्रोत्साहन पाएर पापले मलाई फुस्ल्यायो र त्यसैद्वारा मलाई माऱ्यो। १२ जबकि मोशाको व्यवस्था आफैमा पवित्र छ अनि त्यसको आज्ञा पवित्र, न्यायोचित र असल छ। १३ त्यसोभए, जे असल छ त्यही नै मेरो लागि मृत्युको कारण बन्यो त? त्यस्तो कहिल्यै नहोस्! बरु मभित्र काम गरेर मलाई मृत्युतर्फ लैजाने यही पाप हो भनेर जे असल छ त्यसद्वारा प्रकट हुन सकोस् भनी पापचाहिं मेरो लागि मृत्युको कारण बन्यो। साथै, व्यवस्थाद्वारा पाप अझ बढी प्रकट होस् भनेर पनि यसो भयो। १४ किनकि मोशाको व्यवस्था परमेश्वरबाट आएको हो भनेर हामीलाई थाह छ, तर म भने असिद्ध* र पापमा बेचिएको छु। १५ म के गर्दैछु म आफैलाई थाह छैन। किनकि म जे गर्न चाहन्छु, त्यो म गर्दिनँ तर मलाई जेदेखि घृणा लाग्छ, त्यही म गर्छु। १६ तर यदि म जे गर्न चाहन्नँ, त्यही गर्छु भने मोशाको व्यवस्था ठीक छ भनेर म सहमत रहेछु भनी प्रमाणित हुन्छ। १७ तर अब त्यो काम गर्ने म होइन तर मभित्र बास गर्ने पाप हो। १८ मलाई थाह छ, मेरो शरीरमा कुनै असल कुराले बास गर्दैन, किनकि ममा असल गर्ने चाहना त छ तर गर्ने क्षमता भने छैन। १९ म जे असल गर्न चाहन्छु, त्यो गर्दिनँ तर जे खराब गर्न चाहन्नँ, त्यही नै गर्नेगर्छु। २० त्यसैले, अब यदि म जे गर्न चाहन्नँ, त्यही गर्छु भने त्यो काम गर्ने म होइन तर मभित्र बास गर्ने पाप हो। २१ त्यसैले ममा एउटा यस्तो नियम भएको म पाउँछु: जब म जे ठीक छ त्यो गर्न चाहन्छु, तब ममा खराबी हाजिर हुँदो रहेछ। २२ परमेश्वरको व्यवस्थामा म मनैदेखि साँच्चै आनन्द गर्छु। २३ तर म आफ्नो शरीरका अङ्गहरूमा बेग्लै खालको नियम पाउँछु, जसले मेरो दिमागको व्यवस्थासँग युद्ध गर्छ। अनि मेरो शरीरका अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको व्यवस्थाले मलाई बन्दी बनाउने गर्छ। २४ हाय, म कस्तो लाचार मानिस! मृत्युतर्फ धकेलिंदै गरेको यो शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला? २५ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्! म आफ्नो दिमागमा त परमेश्वरको व्यवस्थाको दास हुँ तर शरीरमा भने पापको व्यवस्थाको दास हुँ।
^ रोमी ७:१४ * शाब्दिक, “शारीरिक।”